အူးဗိုက် ခွင့်လွှတ်သည်၊ အမြန်ပျံလာပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အူးဗိုက် ခွင့်လွှတ်သည်၊ အမြန်ပျံလာပါ
အူးဗိုက် ခွင့်လွှတ်သည်၊ အမြန်ပျံလာပါ
Posted by ဂျစ်စူ on Oct 30, 2012 in Aha! Jokes, Satire | 40 comments
သီတင်းကျွတ်မှာ ကျွတ်ဖို့ တိုက်တွန်းသူတွေကော
မျှားနတ်မှောင် ပွဲဇား အောင်သွယ်တွေကော
တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးမုန့် ဖိုးလာတောင်းကြတဲ့ ရွှေကျိတို့အလင်းစပ်တို့အူးပေတို့ ကော
ရေခွက်နဲ့ ပက်ပြီးတောင်းပန်တဲ့အူးခင်ခတို့ 
နှစ်ခါပြန်တောင်းပန်တဲ့ရွှေအိမ်စိတို့ .
သီတင်းကျွတ်အကြောင်း ရှင်းပြတဲ့ ဘဲအုတို့ 
ဘုရားဖူလိုက်ပို့ တဲ့အူးပေါက်တို့ 
စသဖြင့် ရွာထဲ ရွာပြင်ရှိ
အဆိုပါ အစားစားသော လူတန်းစားတို့ အား အကျွန်ုပ် အူးဗိုက်မှ ကံသုံးပါးတို့ ဖြင့် ပြစ်မှားလွန်ကျူးမိခဲ့သည်ရှိသော်
အပြစ်တို့ အား သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူကြပါကုန်။
ကျွန်ုပ်သူဒေါ်ဂေါင်းအူးဗိုက်အား ကံသုံးပါတို့ ဖြင့် ပြစ်မှားခဲ့သူအပေါင်းတို့ အားလည်း အူးဗိုက်မှ ကျေအေးခွင့်လွှတ်ပါသည်လေ..ရောက်ရာအရပ်က အမြန်ပြန်လာပါ..အဲလေ..သင်တို့ အပြစ်တွေ ဗွေမယူပါခင်ဗျား။
ရွာသူကြီး အူးခိုင်အား ကိတ်မုန့် ပေါင်မုန့် ဟန်ဘာဂါ စမူဆာ အီကြာကွေး ထောပတ် ဘိန်းမုန့် ၊
မုန့် လင်မယား၊ ဘလက်လေဘယလ် ရဒ်လေဘယ်လ် ချီးဖတ် ဗော့ဒ်ကာ ဖာလူဒါ စသဖြင့် စားဖွယ်ဘောဇဉ် အမျိုးမျိုးဖြင့် ကန်တော့ပန်းဆင်ရန်
ရွာသူားများထံမှ ကောက်ခံခဲ့သော ကောက်ခံရရှိငွေ သုံးဆယ့်ခုနစ်ရှစ်သိန်းအား ရာအိမ်မူး အူးဗိုက်မှ ကေတီဗွီ မာဆတ် နိုက်ကလပ် ၌ ဘီအူးမူးပြီး ကျပျောက်သွားပါသဖြင့်
ရွာသူကြီးအူးခိုင်မှ ကျန်ုပ်အား ခွင့်လွှတ်ပါလေ။
ခွင့်လျွတ်သည် ခွင့်လွှတ်ပါ မစ္စတာ သူဒေါ်ဂေါင်း အူးဗိုက် – ဘီ.အီး
ဒါကြောင့်ဟိုတလောက ကြားလိုက်သေးရဲ့ 
ဘုရင့် နောင်ဈေးထဲက သိန်းတစ်ထောင်စုမဲပုံးကို မပြီးပြေးတာ
ခုဆို ပြန်တောင်းပန်လိုက်ရုံပေါ့ နော
ကျုပ်လည်း ခင်ညားနဲ့ ဘီအီးတူတူမူးကြရင်းနဲ့..
ပဲကြီးလှော်တစေ့ လုစားပီး ရန်ဖြစ်ခဲ့တာကို ကျေအေးဖို့
အူးဗိုက် ဘီအီးဖြတ်ထားတာ နှစ်ဆယ့်ငါးမိနစ်စိသွားပြီ
မဟုတ်ဘဲနဲ့လျှောက်ပြောဒယ်…နပေါရီးနဲ့ တူပါတယ်…ကရော်..ကရော်..
နင်ပြောဒေါ့ မုန်းဒယ် မုန်းဒယ်နဲ့
နင်ဒို့ ရပ်ကွက်ထဲက အရူးမလည်း ဗိုက်တလုံးနဲ့ဖစ်နေဘီ
ဒီသဒင်းဂျွတ်မှာ လာ လက်ထပ်ပါ..ဒါဗြဲ။
နန်းချင်ဇယာလေး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် သဗုတ်လေလွင့်လျှောက်ပြောတဲ့ အန်းဂဒီးမိုက်ကို
အူးဗိုက် ဘပုက သူ့ထန်းတောမှာ အကြွေးလာသောက်ထားတဲ့ ထန်းရည်ဖိုးရယ် ကြွက်ကင်ဖိုးရယ်တော့ အကျေလာပေးစေချင်ပါတယ်တဲ့ ။ ဗိုက်ဗိုက်မှာ အကြွေးရှိသလို သူ့မှာလည်း ကလေးတွေနဲ့မို့ပါတဲ့။
ရောက်ရာအရပ်က အမြန်ပျံလာ ဆပ်ပါတဲ့
ဘပုက တစ်ခါမှတောင် မခါဘူးပဲနဲ့ဘယ့်နှယ် ခလေးတွေရောက်လာတာတုန်း
ဘပု ရောက်ရာဘီအီးဆိုင်က အမြန်လာရှင်းပါ..
အူးဗိုက်အမြန်ပျံမလာနိုင်ပါ။ ဘီအီးမူးနေသဖြင့် လေးဘက်ထောက်လာမည်။
ဗွေတော့မယူဘူး ။ငွေတော့ယူသွားပြီး ..။
ဂယ်လဲ ယူလို့ မရပဲနဲ့လျှောက်ပြောတယ်..နပေါရီးနဲ့ တူပါတယ်..ကရော်..ကရော်..
မစ္စတာဗိုက် အမြန်ပျံအလာကို ဘီအီးဆိုင်မှာ ဘီယာသောက်ပြီး စောင့်ရင်ကောင်းမလား
စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဘီအီးမသောက်ရ အမိန့်ပယ်ဖျက်ပြီး မပြီး မသိလို့ပါ။
အမိန့်မပယ်ဖျက်ရသေးလဲ ခွက်ပုန်းလေးတော့ ကစ်လို့ ရပါတယ်တော်..
ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်ကစ်မလား..ရေသန့် ဘူးထဲ ထည့်ကစ်မလား..အအေးဘူးထဲ ထည့်ကစ်မလား..ခုံအောက်ထဲ ဖွက်ကစ်မလား..
အို..ခွက်ပုန်းကစ်နည်း အစုံပလုံ သင်တန်းဆရာ အူးဗိုက်စိတယ်…ဘူ့ မှ ဂရုမစိုက်နဲ့ ..
ကစ်နည်းမျိုးစုံ ရှိဒယ်ရှိုရို့…… ဖျား… ဖျား… ဖျား….
မိတိုက်ဆို သူ အုပ်အုပ်နဲ့သွားရင် အဲလိုကစ်တာအေ့
အူးနေ ခွေးလွှတ်သည်…။ ရောက်ရာအရပ်က ဗိုက်ကလေးအမြန်ပြန်လာပါ…။ ချေးထားသော ပိုက်ပိုက်လည်း ပြန်မတောင်းတော့ပါ…။ တွေ့ကရာ ဘီအီးတွေ တောက်နေရင် ဖောလျော ဖစ်သွားမှစိုးလို့ပါ…။ အူးနေရှေ့မှာပဲ ကောင်းတဲ့ အရက် ပြောင်သောက်ဖို့ခွင့်ပေးပါမည်….။ တွေ့တဲ့သူများ လက်ဆင့်ကမ်းသတင်းပေးကြပါ…..။
“အူးဗိုက် ခွင့်လွှတ်သည်” ဆိုတာ
အူးဗိုက် က ခွင့်လွှတ် တာလား?
အူးဗိုက် ကို ခွင့်လွှတ်တာလား?
မရှင်းရင် ကျွတ်မလိုလို၊ မကျွတ်မလိုလို နဲ့ ဟိုယိုင် ဒီထိုး ဖြစ်နေမယ်။
သဒင်းဂျွတ်မှာ သူဒေါ်ဂေါင်းအူးဗိုက်အား ပြောမှာဆိုမှားပြစ်မှားခဲ့ကုန်သော နာနာဘာဝ သကြားဗြဟ္မာ နတ်ဒေ၀ါမနုဿ သတ္တ၀ါ ဖွတ်မှိ စ္ဆာ အပါင်းကို အူးဗိုက်မှ ခွင့်လွှတ်ပါသည်လို့စိုလိုပါတယ်ခင်ဗျ ။
ကျွတ်မလိုလိုဖြစ်တာ ငါးခါ မကျွတ်တကျွတ်က သုံးခါ ကျွတ်ခဲ့တာက လေးခါပဲ စိပါတယ်ခင်ဗျ
အိုကွယ် နေ့ဒိုင်းကျပျောက်တာမှ မဟုတ်တာ… ခါဂျီးရက်ကြီး ရှိမှဖြစ်တာပဲ ဟာကို.. ခွေးလွှတ်တယ်…။
ကျန်တဲ့ ခါဂျီးရက်ဂျီးတွေမှာလဲ ခုလိုပဲ ခဏခဏကျပျောက်ပါရစေနော်..အူးကြောင်
အိုက်ဗူး အိုက်ဗူးကိုလုံးဝခွင့်မလွှတ်ပါ။ အိမ်မှူးဖြစ်ပြီးတယ်လဲပေါ့ဆသကိုး။
ရွှေကြည်ကနေ ရွှေကျိ (ပက်ကျိဆိုကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ) အောင်ပြောတဲ့အတွက် ပိုပြီးခွင့်မလွှတ်နိုင်ပါ
တွေ့ရှိပါက ဖမ်းချုပ်ပြီး သင်္ကန်းဝတ်ပေးမည်။
အူးဗိုက်က မမူးရရင် တိုက်ပတ် ဂျွမ်းထိုး ကင်းမြီးကောက်ထောင် နေတတ်တာနော်..
သောက်စရာမစိလို့ ကတော့ သင်္ကန်းကြီးခြုံပြီး တိုင်ပတ်နေလိုက်မှာ
ဘကြီးဘုန်း မျက်စိနောက်ပြီး ထိပ်လာခေါက်ရင်တော့ ရွှေကျိ တရားခံ…
ခွေးလွှတ်ပါ၏… ဟီ့.. ဗြောက်အိုးကတဒိုင်းဒိုင်း လွှတ်တဲ့ခွေးဒွေက ကိုက်နဲ့….လွှတ်ကြည့်ကောင်းမှာ :harr:
ဒေါ်ဂွတိုကြီး ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုလဲ ပီးရော..မာမွတ်ရှာပွတ်အူးခိုင်ကတော့ ကမ္ဘာမကျေပဲတဲ့
ရာအိမ်မှူး ဦးဗိုက် ရွာထဲက မီးသတ်ရေကန်က ရေတွေကို ဟိုတစ်ခါ ရေပြတ်တုန်းက ခိုးရောင်းပြီး ဘီအီးသောက်တာ….
တားတားကလဲ ဦးဗိုက်ကို စိတ်နဲပစ်မှား ကိုယ်နဲ.ပစ်မှာ ပါးစပ်နဲ.ပစ်မှာ ခွက်နဲ.ပစ်မှား ပုလင်းနဲ.ပစ်မှား အမြည်းနဲ. ပစ်မှား အသွယ်သွယ်သော ပစ်မှားမိသည်ရှိသော် သုံးခွက်မြောက် ဘီအီးအား မော့ကာ တောင်းပန်လိုက်ရပါဂျောင်း……….
နာ့ ကောမန်.လေး ပျောက်သွားပါလားအေ…….ချိတ်မကောင်းထာ..
လောကကြီးကိုဘောင်ခတ် မျက်မှန်ကြီးတပ်ပြီး ဘာတွေပျောက်နေမှန်းမသိဘူး.
“စိတ်ပျိုရင် ကိုယ်နု” ဆိုတဲ့ မြန်မာစကား ကလည်း လူတွေ စိတ်ပျော်ရွှင်
လန်းဆန်းအောင် နေတတ်ဖို့ အားပေးနေတယ်။
ဗိုက်ဗိုက်ရေ…..မူးပြီး အလှူငွေ ကျပျောက်တာကတော့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မလို့ ……ခွင့်မလွှတ်ပါ…
မူလ လက်ဟောင်း လက်မမျိုးဆက်
လက်မလဲ မစိပဲနဲ့လျှောက်ပေါတယ်..နပေါရီးနဲ့ တူပါတယ်..ကရော်..ကရော်..
ခွင့်လွှတ်သည် ဘီအီးပုလင်းပျောက်တာတော့ခွင့်မလွှတ်ပါ ရောက်ရာအရပ်မှ
အမြန်ပုန်း … အဲလေ …အမြန်လာ
အူးဗိုက် ခင်ဂျားဂျီး ကို အနော် ကျောထားတယ်လေ..။ ဒီလိုလုပ်မယ်ချိုရင် ခင်ဂျား တစ်ယောက်တည်း မရုတ်ပါနဲ့ရို့ရေ..။ အနော်ကို ခေါ်ပါချို။… ခင်ဂျားဂျီးက မခေါ်ဝူး…။ ခင်ဂျားဂျီးကို အခု ကနေ စဘီး မုန်းတွားဘီ..။ ခင်ဂျားဂျီးကို ကျုပ် ဆဲချင်တယ် ဂျာ…ခင်ဂျား ကြီး ဘ၀ဆက်တိုင်း… ဟို အင်္ဂါ မပါပဲ မွေးပါကျေ ဂျာ
ကျပျောက်တဲ့ မန်းနီးထဲက ဆယ့်ခုနစ်ရှစ်ရာ ကျန်သေးတယ်..
ဟဲ့ ဟဲ့ ရှယ်ယာနော် ရှယ်ယာ :harr:
ဆယ်ခုနှစ်ရှစ်ရှာ ဆိုတော့ 17800 ကျပ်ပေါ့ ဟုတ်လား လာယူမယ် အနည်းဆုံး တစ်ယောက်သောက် တစ်ဝိုင်းစာတော့ရတယ်။ ဘယ်နေ့ပေးမှာလဲ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တစ်နေရာမကျန် အမျိုးရှိသူများအား လီကောင်း